RASMI: Lionel Messi Oo Xalay Saqdii Dhexe Ka Tegay Barcelona & Xogta Laga Hayo Kooxda Uu Sida Xorta Ah Ugu Wareegayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Lionel Messi Oo Xalay Saqdii Dhexe Ka Tegay Barcelona & Xogta Laga Hayo Kooxda Uu Sida Xorta Ah Ugu Wareegayo
RASMI: Lionel Messi Oo Xalay Saqdii Dhexe Ka Tegay Barcelona & Xogta Laga Hayo Kooxda Uu Sida Xorta Ah Ugu Wareegayo
July 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka La Liga 1
Lionel Messi ayaa xalay saqdii dhexe ka tegay Barcelona, isla markaana noqday ciyaartoy xor ah. Xaaladdan ayaa noqotay mid aanay taageereyaasha Barelona waligood ku riyoonin in ay dhacayso, mana doonayaan in ay akhriyaan xaqiiqada noocan ah iyo wararka ku saabsan bixitaanka Messi.
Markii ay xalay saqdii dhexe saacaddu taariikhdu isbeddeshay ee ay bilaabatay July 1, heshiiskii uu Lionel Messi kula jiray ayaa si rasmi ah u dhamaaday, waxaanu si rasmi ah uga baxay liiska ciyaartoyda Barcelona.
34 jirkan ayaa si rasmi ah u noqday ciyaartoy xor ah oo suuqa yaalla, isla markaana kooxda uu doono u wareegi karaya iyadoo aanay cidina ka daba-hadlaynin.
Sida ay warbaahinta Spain qoreen, Barcelona ayaa wax badan isku dayday inay heshiis cusub ka saxeexdo Lionel Messi, laakiin waxa jirtay kala-duwanaansho labada dhinac ah oo keentay in lasoo gaadho waqtigan adag.
Inkasta oo uu heshiiskii uu kula jiray Barcelona uu dhamaaday, taasi kama dhigna in laacibkani aanu qandaraas cusub u saxeexi karaynin kooxda uu kusoo kacaamay ee uu cimrigiisa oo dhan u ciyaarayay, waxaana suurtogal ah, kooxduna kalsooni ka muujinaysaa in laacibkan ay heshiis cusub la geli doonaan.
Warbaahinta Spain ayaa macno badan u yeelaya in uu dhamaaday qandaraaskii Messi, xalayna uu xor ka noqday, waxaanay sheegayaan in wada-hadalka iyo qandaraas cusub oo hadda ay Barcelona ka rajayso Messi uu noqonayo mid ka duwan, kana hawl-badan sidii intii aanu qandaraaskiisa hore dhamaanin.
Xiddigan reer Argentina oo toddobaadkii hore ay da’diisu noqotay 34 jir, isla markaana qaab ciyaareed layaableh muujiyey Usbuucan oo uu xulka dalkiisa guul weyn u horseeday isagoo laba goolna u dhaliyey, waxa uu awooddiisa oo dhan xilligan iskugu geynayaa sidii uu dalkiisa ugula guuleysan lahaa koobkii ugu horreeyey taariikhdiisa. Saddex gool ayuu dhaliyey laba kalena wuu caawiyey illaa hadda.
Maadaama uu dhamaaday heshiiskiisu, ayna jirto kala duwanaansho u dhexeeya kooxdiisa Barcelona oo uu sannad ka horna sheegay inuu tegayo oo qaab muran dhaliyey lagu joojiyey, ma jirto koox illaa hadda si rasmi ah loola xidhiidhinayo, xogaha warbaahintu soo tabinayaana waxay u badinayaan inuu heshiis u saxeexi doono Barcelona oo uu sii joogayo.
Si kastaba, Lionel Messi saacaddan aynu joogno kama tirsana Barcelona, waxaanu ka baxay liiska ciyaartoydeeda maadaama uu heshiiskiisii dhamaaday.
Benta kadaya dadka messi mid waligi tabata maahan